Mpanamboatra kaopy gilasy PET ambongadiny | Copak
Ao amin'ny COPAK dia mazava i Crystal Kaopy gilasy PET novolavolaina. Ny kaopy tsirairay dia misy fonony fisaka na rakotra dôma. Ny logo sy ny soratra miloko iray ka hatramin'ny sivy dia azo soratana amin'ny fangatahan'ny mpanjifa.
Plastika azo atsipy Kaopy gilasy PET Ny kaontenera sundae dia porofo miovaova, mateza ary mandrava.
Ny mazava mazava amin'ny Kaopy gilasy PET manome fahitana avo lenta momba ny vokatra, mampitombo ny antso ataon'ny mpanjifa ary koa ny varotra manentana. Tsara ho an'ny fivarotana gilasy, tsena fivarotana, zaridaina fialamboly, kianja, na fijoroana amin'ny karnavaly, hetsika karakaraina sns.
Ny mari-pana azo zahana ambony indrindra amin'ny Kaopy gilasy PET 70 ℃ ny vokatra. Noho izany, dia be mpampiasa amin'ny famonosana sakafo mangatsiaka sy zava-pisotro mangatsiaka.
Mba hifanaraka amin'ny kaopy dia manome takelaka fisaka mangarahara sy mateza i COPAK, ary misy lavaka boribory na antsokosoko na lavaka fiampitana ho fampiasana mololo isan-karazany.
Sariaka ara-tontolo iainana, tsy misy fofona, mangarahara be, tsara tarehy ary manaraka ny fepetra takiana amin'ireo fitoeran-tsakafo sy zava-pisotro.
1) Fampiasana: kaopy plastika esorina amin'ny ranom-boankazo, ronono, gilasy, yaorta, sakafo, salady ary vokatra hafa.
2) Fitaovana: Sakafo polyethylene terephthalate.
4) Volume: kaopy 180ml-350ml, misy boky samihafa.
5) Fanontana: 1-6 loko manonta fanontana & offset fanontana no misy.
6) Volavola: ekena ny famolavolana logo an'ny mpanjifa.
7) Fotoana fandefasana: 20-25 andro fiasana hatramin'ny nahazoantsika ny petra-bola.
8) taratasy fanamarinana: CE, FDA, SGS, ISO9001 na fangatahana
9) Fe-potoana fandoavana: T / T. L / C. PayPal.
Lisitra feno amin'ny kaopy gilasy PET:
PET ICE CREAM CUPAM SERIES
Teo aloha: Kofy plastika PET miaraka amin'ny sarony
Manaraka: Saron'ny Cup Cup
Kaopy plastika misy sarony